मिस वर्ल्ड फाइनलमा लाइरहेको लुगा खुस्केपछि के गरिन् प्रियंका चोपडाले? – साँचो खबर
बलिउड अभिनेत्री प्रिय‌ंका चोपडा ‘मिस वर्ल्ड’ बनेको २० वर्ष पूरा भएको छ। सन् २००० नोभेम्बर ३० मा १८ वर्ष उमेरमै उनी मिस वर्ल्ड बनेकी थिइन्। यी दुई दशकमा उनले बलिउड हुँदै हलिउडसम्मका फिल्ममा सशक्त अभिनयमार्फत् आफूलाई कुशल अभिनेत्रीका रुपमा स्थापित गर्न सफल बनेकी छिन्। प्रियंका मिस वर्ल्ड बनेको दुई दशक पुरानाे सन्दर्भ र उनको सफल अभिनय यात्राबारे गत साता भारतका मिडियाहरूमा उनीबारे विशेष चर्चा भएको थियो।
डिएनएइन्डियाका अनुसार, मिस वर्ल्ड २००० को प्रतिस्पर्धा बेलायतको मिलेनियम डोममा भएको थियो। प्रियंकाले ९५ देशका मोडललाई उछिन्दै मिस वर्ल्डको ताज हात पारेकी हुन्। मिस इटाली र मिस टर्की भने रनर-अप भएका थिए।
प्रिय‌ंकाको जीवनशैली र कार्य क्षेत्र मिस वर्ल्ड भएसँगै फेरियो। उनी फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्। सन् २००२ मा तमिल फिल्म ‘थमिजा’ बाट यो क्षेत्रमा पाइला टेकेकी उनले २००३ मा निर्देशक अनिल शर्माको फिल्म ‘द हिरोः लभ स्टोरी अफ अ स्पाइ’ मा अभिनयसँगै बलिउड प्रवेश गरेकी हुन्।
त्यसपछिका केही फिल्ममा सफलताको स्वाद चाखिसकेकी उनका लागि मधुर भन्डारकर निर्देशित ‘फेसन’ टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो। ‘अन्दाज’, ‘अग्निपथ’, ‘क्रिश’, ‘सात खुन माफ’, ‘बर्फी’, ‘बाजिराव मस्तानी’, ‘डन १ र २ आदि उनका महत्वपूर्ण फिल्म हुन्।
दर्जनौं हिट फिल्म दिएकी उनले मुख्य अभिनेत्री, चरित्र अभिनेत्री र नकारात्मक भूमिकामा समेत अवार्डहरू जितेर आफूलाई भर्साटाइल साबित गरेकी छिन्।
सन् २०१५ मा त झनै उनले हलिउड प्रवेश गरेर सफलताको अर्को छलाङ मारिन्। यही वर्ष सेप्टेम्बरदेखि उनी एबिसी (अमेरिकन ब्रोडकास्टिङ कम्पनी) स्टुडिओबाट प्रसारण हुने ‘क्वान्टिको’ मा काम गर्न थालिन्। क्वान्टिको अमेरिकी थ्रिलर नाटक हो। यो २०१५, सेप्टेम्बर २७ देखि प्रशारण भएको थियो। हाल उनी बलिउड र हलिउड दुवैतिरको काम सन्तुलन मिलाएर करिअर अघि बढाइरहेकी छिन्।
अभिनयसँग प्रियंकाको प्रेम र वैवाहिक जीवनका खबर पनि मिडियामा छाइरहन्छ। सन् २०१८ को मेदेखि अमेरिकी गायक तथा अभिनेता निक जोनाससँग ‘डेट’ गर्न थालेपछि उनको प्रेम सम्बन्धबारे निकै चर्चा भएकाे थियो।
उनीहरूको सम्बन्ध २०१८ अगस्टमा इन्गेजमेन्ट हुँदै सोही वर्षको डिसेम्बरमा विवाहमा परिणत भयो। डिसेम्बर लागेसँगै प्रियंका र निकको वैवाहिक सम्बन्धले दुई वर्ष पूरा गरेको छ। यतिबेला यो जोडी मिडियामा छाएका छन्।
अभिनयमा जस्तै प्रियंकाले आफूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन्। कहिले गीत गाएर, कहिले फिल्म निर्माण गरेर अनि कहिले समाजसेवाकाे काममा सक्रियता देखाएर उनले वास्तविक जीवनमै पनि भर्साटाइल प्रमाणित गर्दै आएकी छिन्। उनको यो क्षमताको चर्चा बलिउडदेखि हलिउडसम्म निरन्तर भइरहन्छ।
डिएनए इन्डियाले प्रियंका मिस वर्ल्ड हुँदाका केही रोचक क्षणबारे तयार पारेको सामग्री अनुसार, त्यसबेला उनी भर्खरै १८ वर्षकी थिइन्। मिस इन्डिया २००० घोषणापूर्व प्रियंकालाई सोधिएको थियो, ‘यदि तपाईं इडेन बगै‌ंचामा भगवान हुनुहुन्थ्यो भने कसलाई सजाय दिनुहुन्थ्यो? एडम, इभ वा स्याटनलाई?’
कार्यक्रम प्रस्तोता राहुल कन्नाले सोधेको यो प्रश्नको जवाफमा प्रियंकाले भनेकी थिइन्, ‘यदि म इडेनको बगै‌ंचामा पुलिस भइदिएको भए म स्याटनलाई सजाय दिन्थे। स्याटन सर्प हो र ऊ दुष्ट छ। र, मलाई लाग्छ दुष्टता बनाइने होइन, हुने कुरा हो। इभलाई स्याटन सही लाग्यो, उनले स्याटनलाई विश्वास गरिन्। राम्रो-नराम्रो भन्नेमा म पक्षपाती हुन चाहन्नँ, तर सत्य यही हो कि दुष्ट भइन्छ, कसैले बनाउने होइन।’
यही जवाफसँगै उनी मिस इन्डिया २००० घोषित भइन्।
खासमा प्रश्न इडेनको बगै‌ंचामा भगवान भइदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने थियो। तर जवाफ दिँदा प्रियंकाले पुलिस भइदिएको भए भन्दै सम्बोधन गरिन्। तर उनको त्यही उत्तरले उनलाई मिस इन्डिया २००० बनायो।
२००० मा मिस इन्डिया घोषित भएको केही महिनापछि उनी आत्मविश्वासका साथ मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेकी थिइन्। प्रतियोगिताको ‘स्विमसुट सेग्मेन्ट’ माल्दिभ्समा भएको थियो। त्यसमा प्रियंकाले गुलाबी रङको स्विमसुट लगाएकी थिइन् अनि कम्मरमा हरियो रङको स्कार्फ बाँधेकी थिइन्।
फिनालेका बेला पनि उनले गुलाबी रङकै स्ट्रिपलेस (कुममा अड्याउने तुना नभएको) गाउन लगाएकी थिइन्। गाउनसँग सुहाउने हार उनको घाँटीमा टपक्क कसिएको देखिन्थ्यो। साथमा उनले सल पनि छाडेकी थिइनन्।
त्यसबेला लगाएको लुगा असजिलो थियो भन्ने विषयमा प्रियंकाले हालै प्रशंसकसँग कुराकानी क्रममा भनेकी छन्, ‘सन् २००० सालमा म मिस वर्ल्ड भएँ। तर त्योबेला लगाएको लुगा मेरो शरीरमा टेपले टाँसिएको थियो। कार्यक्रम अन्त्यसम्म त्यो लुगा सम्हाल्न मलाई धौधौ पर्‍यो।’
प्रियंकाको लुगा टाँसेका टेपहरू विस्तारै उक्किन थालेपछि उनलाई चिन्ता पर्‍यो। तर उनले आफ्नो लुगा जोगाउन तुरून्तै दिमाग लाइन्।
उनले त्यस्तो समयमा आफ्नो लुगा कसरी सम्हालिन् भन्नेबारे थप भनेकी छन्, ‘म शोमा हिँड्दा नमस्कार गर्दै हिँडे। दर्शकहरूलाई मैले नमस्कार गरेँ भन्ने लाग्यो तर वास्तवमा मैले त्यो लुगा अड्याउन त्यसो गरेकी थिएँ। पछिको पूरा समय मैले नमस्कार गरेरै बिताएँ।’
मिस वर्ल्ड २००० घोषणा भएपछि मिस वर्ल्ड १९९९ ले आफ्नो शिरबाट ताज खोलेर प्रियंकालाई लगाइदिइन्। मिस वर्ल्ड १९९९ भारतकै युक्ता मुखी हुन्।
मिस वर्ल्ड २००० को फाइनल राउन्डमा प्रियंकालाई यस प्रकारको प्रश्न सोधिएको थियो, ‘तपाईंको विचारमा अहिले संसारमा सबभन्दा प्रभावकारी र सफल महिला को लाग्छ? अनि किन?
सो प्रश्नको उत्तरमा उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले प्रशंसा गर्ने थुप्रै महिला हुनुहुन्छ। तर सबैभन्दा बढी म मदर टेरेसाको प्रशंसक हुँ। मदर टेरेसा विचारशील र दयालु हुनुहुन्छ।’
यही उत्तरसँगै प्रियांका मिस वर्ल्डको ताजबाट सम्मानित भएकी हुन्। तर प्रश्न अनुसारको उत्तर दिनमा भने प्रियंका चुकेकी थिइन्। किनभने मदर टेरेसाको सन् १९९७ मा निधन भएको हो।
तै पनि उनी मिस वर्ल्ड बन्ने पाँचौं भारतीय बनिन्। सन् २००० मै प्रियंकासँगै मिस इन्डियाका प्रतिस्पर्धी लारा दत्त ‘मिस युनिभर्स’ र दिया मिर्जा ‘मिस एसिया प्यासिफिक’ भएका थिए।
लारा र दियाले पनि बलिउडमा अभिनय गरेर चर्चा कमाए। तर उनीहरू अचेल निस्क्रिय छन्। प्रियंकाकाे अभिनय यात्रा भने सफलताको नयाँ गन्तव्य खोज्दै निरन्तर अघि बढिरहेको छ।
Previous: विपन्‍न देशहरुलाई सबैभन्दा धेरै कोरोनाको खोप वितरण गर्दै चीन
Next: २१ औ शताब्दीको नेपालमा महिलाहरुको प्रगती र महिलाहरु विरुद्ध अपराध